ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : (6)၄၊၄၊၂၀၀၉ ဒိုင်ယာယီ
မနေ့ တုန်းက မောင်လေးအငယ်ဆုံး online ပေါ်လာလို့ chat ဖြစ်တယ်။ စာမေးပွဲတွေကြောင့် မျက်စေ့အားနည်းနေတယ်တဲ့ ။ သူစာမေးပွဲအောင်တယ်တဲ့ ။ ကျမမောင်လေးအတွက် အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ တတိယအမက မျက်မှန်လုပ်၇င် ဂိုင်းကောင်းကောင်းလေးလုပ်လို့ မှာလို့ သူ့ ကိုပြောပေး၇တယ်။ တတိယအမ က yahoo ဘဲသုံးတာ သူ့ အလုပ်က yahoo ဘဲဖွင့်ထားတော့ ၇န်ကုန်နဲ့ chat မ၇ဘူး။ ဒုတိယအမ ကကျမရဲ့ googlemail မှာ voice msg ပေးထားတယ် သူဒီနေ့၎။၄။၂၀၀၉ မှာ online တက်မယ်တဲ့။ မနေ့ တုန်းက တော်တော် ကို အလုပ်များတယ်။ အိမ်သန့် ၇ှင်းေ၇းနဲ့အချက်အပြုတ် ကူလုပ်ရလို့ ။ အတူနေတဲ့အမဲမလေး ဂျူနီယာရဲ့ အမျိုးတွေ လေဆိပ်မသွားခင်တညလာတည်းမှာမို့ လို့ ။ ကျမကဧည့်သည်တွေအတွက် ထမင်းချက်တယ်။ ဟင်းကတော့မျှစ်နဲ့ပဲကတ္တီပါပြုတ်ကျော်တယ်။ ဂျူနီယာကတော့ ကြက်ကင်တယ်၊ အမဲသားနှပ်တယ်။
ဧည့်သည်တွေကတော့ သူ့ ယောင်းမနဲ့ ကလေး၃ယောက်။ ကလေးတွေကအရမ်းကဲတယ်။ အကြီးဆုံးကလေး က ကောင်းကောင်းထက် ၈လကြီးတယ်။ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ မှာမွေးတဲ့ ကလေးပေါ့ ။သူ့ ရဲ၇ာသီခွင် က တရုပ်လို နဂါးနှစ်လို့ ပြောတော့သူတော်တော်ပျော်သွားတယ်။ ဒုတိယက မိန်းခလေး အသက် က ၆နှစ်။ ၆နှစ်လို့ သာပြောတာ တော်တော်ထွားကြိုင်းတယ် ၉နှစ်သား သူမရဲ့ အကိုနဲ့ တရွယ်ထဲဘဲ။ သူမ ကအခုကတည်းက အစားလျှော့စားတာ ။ ကယ်လိုရီကောင့် လုပ်တာတွေရှိနေပြီ။ ကျမတို့ ဆို အဲဒီအရွယ်မိဘပေးတာစားတာဘဲ။
အငယ်ဆုံးကလေးက မိန်းကလေး (လမစေ့ဘဲမွေးထားတဲ့ကလေးတဲ့) လမစေ့လို့ သာတော်သေးတယ်။ ဆော့လိုက်တာမျောက်ကို ၇ှုံးေ၇ာအသက်က ၁နှစ်နဲ့ ၃လ စကားတော့မပြောတတ်သေးဘူး။ အမှိုက်ထုတ် တွေကိုဖွင့်ဖွင့် ပြီးတွေ့ သမျှပါးစပ်ထဲ ထည့်တတ်လို့ မနေနိုင်တဲ့ ကျမလိုက်ဆွဲ၇တယ်။ အမှိုက်ထုတ်တွေထဲမှာ ဖွင့် ပြီးသားစည်သွတ်ဘူးခွံတွေပါလို့ ကလေးလက်ရှမှာစိုးလို့ ။ ဒါတောင်မှကြမ်းပြင်မှာခလုတ်တိုက်လဲတာ နှုတ်ခမ်းပေါက်သွားသေးတယ်။ သူ့ အမေနဲ့ သူ့ အဒေါ်က တခါမှလိုက်ဆွဲတာမတွေ့ ဘူး။
မနက်အစောကြီး 2:30 am မန်ချက်စတာလေဆိပ်ကို ကားနဲ့ ထွက်သွားကြတယ်။ ကျမကတော့ ကျမအမ chatting ၀င်မဲ့ အချိန်ကိုစောင့်ရင်းမှေးတချက် အိပ်တချက်နဲ့ ပေါ့ ။ ရန်ကုန်အင်တာနက် connection ကတော်တော်ကို့ နှေးတာ။မမကြီးနဲ့ ဒုတိယ အမနဲ့chatting ခနတက်ပြီး vzo ထဲ ၀င်မရလို့ အမတွေ အိမ်ပြန်ဖို့ဖုန်းလှန်းဆက်လိုက်တယ်။ ကောင်းကောင်းနဲ့ စကားခနလေးပြောဖြစ်တယ်။ အမတွေ ပြန်သွားပြီးတဲ့အထိ အမရဲ့ Account ကမီးလင်းနေတုန်းဘဲ ။ အဲဒါနဲ့ ကျမကမောင်လေးကိုလှန်း ဖုန်းဆက် လိုက်တာ။ ဟို ဘက်က အမည်မသိသူကကျမ အမရဲ့ account ကို ၀င်သုံးနေတာကို မောင်လေးကို Who are you? တဲ့။ ပြီးတော့ don't call me now တဲ့။ သူလဲ ရုံးဆင်းချိန်မို့ ကသုတ်ကရက်ပြန်သွားတယ်။ သေချာတာကတော့ မမကြီးနဲ့ ဒုတိယအမ တို့ အိမ်ပြန်သွားကြပြီလေ။ မောင်လေးက ဘာမမပြောနေပါနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဒီလို ပါဘဲတဲ့။
အဲဒါနဲ့ ကျမ အဲဒီသူ ကို မသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီး မပြန်သေးဘူးလား။ connection မကောင်းဘူးနော်လို့စာစရိုက်တယ်။ နောက်ပြီး တော့ ဘာမှပြန်မလာတာနဲ့please sing out now, I know you are using other people account by mistake. ဆို တော့ ဘာမှ ပြန်မလာဘဲ ဆက်သုံးတယ်။ ဒါကြောင့် Hmawbi မြို့ ကကျဉ်းကျဉ်းလေးနော်။ အင်တာနက်ဆိုင်ဆို၇င်လဲ တဆိုင်ဘဲရှိတယ်။ IP address ကိုကြည့်ပြီးဆိုင်ကို စုံစမ်း ရင်ဘယ်သူသုံးနေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး sign out လုပ်ပါလို့ ထပ်ရိုက်လိုက်တော့ မှထွက်သွားတယ်။သုံးတဲ့သူအပေါ်၇င့်ချင်လို့် မဟုတ်ပါဘူး။ common sense လေးနဲ့ သူများ privacy ကို မကြည့်မိအောင်လို့ ပါ။ genuine mistake လဲဖြစ်နိုင်တာမို့်မောင်လေးပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။ အဲဒီလို့ မမှားအောင်လဲအမတော်တွေကို နည်းနည်းလေး alert လုပ်၇မယ်။
အမကလဲ connection ပြတ်သွားတဲ့တုန်း အချိန်စေ့ သွားလို့ sign out မလုပ်မိဘူးထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်သုံးတဲ့သူ ဆက်ပြီးသုံးနေမိေ၇ာ။ တကယ်လို့ sensitive information တွေပါရင်တော့ ဒုက္ခေ၇ာက်မှာ။ ညနေမောင်လေးအငယ်ဆုံးဆီဖုန်းခေါ်တော့ ဆက်သွယ်ေ၇းဧ၇ိယာပြင်ပသို့ေ၇ာက်၇ှိနေပါသည်တဲ့။ ညီမလေးဆီဆက်တော့လဲ ဒီလိုဘဲ။ ခက်တယ်နော် မြန်မာပြည်ကမြို့ နယ်တော်တော်များများက ဆက်သွယ်ေ၇း ဧ၇ိယာပြင်ပကိုေ၇ာက်ေ၇ာက်နေတာဘဲ။ တခုခုတော့ ပြောင်းလဲသင့် ပြီ။ Obama လို yes we can လို့ အာမခံပြောနိုင်မဲ့ သူ တစ်ယောက်ယောက်၇ှိ၇င်သိပ်ကောင်းမှာ။ long term dream.
ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတဲ့ ၀တ္ထုတခုရဲ့ အစမှာလားအဆုံးမှာလားမသိ
မည်သူကိုမှမရည်၇ွယ်ပါတိုက်ဆိုင်မှုရှိလျှင် ခွင့်လွတ်ပါ တဲ့အဲဒီစကားလေးကြိုက်လို့ သုံးလိုက်တယ်။
နာ ဂ လွတ် ကျောက်ဒတ်ထာ နော့ ။ နာ့ ဂို လာမပြောနဲ့ မင်းဘာဖြစ်တွားမယ် ထင်သလဲ။ နာ ဂ ဂလိုမျိုးတွေ လဲေ၇းလေ့ေ၇းထမရှိဘူး ။ ဒါကတော့ ပြာလောင်ထဲက စကား။ လွတ်ကြိုက်လို့ မှတ်ထားတာ
Posted by ရိုးရိုး at Saturday, April 04, 2009
(27) ၅ယောက်ကသယ်၊၃၀ကကြိတ်၊ဖျာကြီးနဲ့ လိပ်၊ ဂူကြီးထဲ...
(26)DAY2&3DIET JOURNEY
(25) DAY 1 DIARY
(24) MY DIET PLAN (၀ိတ်ချမယ်)
(23) ဧပြီး ၂၄ရက် ၂၀၀၉ သောကြာနေ့Diary
(22)ကိုကြီးကျော် ၊ ပခန်းကျော် ၊ ဦးမင်းကျော် ၊ ဖေေ...
(21)cigars, fags, cigarettes
(20)အရူး ဖုန်းငို ဆပ်သွားတော တွင်နေသည်။
(19)HAPPY BURMESE NEW YEAR DAY
(17)ရင်ထဲကသစ်ပင် (tree growing inside lungs)
(16)၉ယောက် အမေပု လင်
(14)MY FALLING TEARS
(13)သင်္ကြန်အကြို နေ့ က ကမ်းနားသစ်ပင်များ
(11)မြို့ မ(၂) တိုးချဲ
(10)Brandy, Elderly & Cat wee wee
(9)သားကြီးလာရင် " မုန့် လက်ဆောင်း "
(7)7th April (I had bad day)